के तपाईंको हातको नङ फुलेको छ ? के कारणले फुल्ने गर्छ नङ हेर्नुहोस – Jagaran Nepal
के तपाईंको हातको नङ फुलेको छ ? के कारणले फुल्ने गर्छ नङ हेर्नुहोस
प्राय:मनिसहरुले आफ्नो हातको रेखा हेरे’र भविष्य हेर्ने गर्ने गर्दछन । आफ्नो दिन चर्य कसरी बित्ने छ भने पनि हात हेर्ने गर्दछन ।त्यति मात्रै होइन तपाईको हात हेरेर तपाईको स्वास्थ्यबारे पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।हातको प्रत्यक नङमा रहेको से’तो आधा चन्द्रमा निशान’बाट पनि तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर पत्ता ल’गाउन सकिन्छ ।
नङको तल्लो भागमा सेतो आधा चन्द्र बनेको हुन्छ । नङको अरु भागभन्दा त्यो भाग अलि धेरै सेतो हुने गर्छ । त्यो नंङको एउटा प्रमुख भाग पनि हो । यस भागलाई ल्याटिन भाषामा ‘लुनुला’ भनिन्छ । यसलाई नेपालीमा सानो चन्द्र पनि भन्ने गरिन्छ । यो निशान कुनै डि’जाइन भने पक्कै होइन । यसले तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने रहस्य समेत खोल्ने गर्दछ ।
चीनको परम्परागत स्वास्थ्य समुदायमा यसलाई कसैको स्वा’स्थ्य मापन गर्ने ब्यारो’मिटरको रुपमा लिइन्छ । लुनुलाले तपाईको स्वास्थ्य स्थितिबारे बताउने गर्छ । यदी तपाईको स्वास्थ्य ठीक छैन भने यी निशानहरु तपाईको नङमा देखि’दैनन् । स्वास्थ्य’मा सुधार भए लगत्तै यी निशानहरु तपाईको नङमा पुन देखिन थालछन् । सामान्य लुनुला यदी तपाईको १० औलामध्ये ८ वटा नङमा लुनुला सेतो रंगमा छन् भने तपाईको स्वास्थ्य एकदम ठीक छ । तपाईलाई टेन्सन लि’न जरुरत पर्दैन ।
लुनुला (सानो चन्द्र ) कम हुँदैछ ?
यदि तपाईको नङमा लुनुलाका निशान’हरु हराउँ’दै गएका छन् र बुढी औला’मात्र निशान छ भने तपाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजक हुने अवस्था आएछ भन्ने बुझ्नु’पर्छ । तपाई छिट्टै नै बिरामी हुने संकेत भएको यसले देखाउँछ । हिमचुली न्युजबाट